Description: MOQ: 500pcs Trade Okwu: FOB, EXW, CPT, C & F, CIF Ịkwụ Ụgwọ: T / T Paypal West Union, Samples: Samples maka free ewepu ibu Sample ebute oge: 3-8 na-arụ ọrụ ụbọchị mgbe iji enen Certificate: ISO 9001- 2008, SGS, BV Product nju: RFID Inlay mpempe akwụkwọ Akụkụ: N'adịghị RFID prelam bụ a ọkara ngwaahịa nke a na-eji na-eme RFID kaadị na ndị ọzọ yiri ngwaahịa. RFID Inlay mpempe akwụkwọ nwere ike ji mee kpọmkwem dị ka RFID mmiri inlay na RFID akọrọ inlay. Akọrọ inlay na a ọnọ on a s ...
RFID Inlay mpempe akwụkwọ
Atụmatụ: N'adịghị RFID prelam bụ a ọkara ngwaahịa nke a na-eji na-eme RFID kaadị na ndị ọzọ yiri ngwaahịa. RFID Inlay mpempe akwụkwọ nwere ike ji mee kpọmkwem dị ka RFID mmiri inlay na RFID akọrọ inlay. Akọrọ inlay na a na-ọnọ na a mkpụrụ ma ọ bụ ụgbọelu. Ọ bụrụ na mkpuchi na nrapado, ọ na-akpọ a mmiri inlay. RFID ọcha Wet Inlay bụ adaba na mfe, ihe ọtụtụ mee.
RFID inlay mpempe akwụkwọ na-ekewet nke ihe IC (Integrated Circuit, Mgbawa) na a Dipole mpi. Itinye poolu na IC anyị na-ejikarị a eriri.
RFID Monza3 okirikiri nhọrọ ukwuu Inlay
Previous: 13.56Mhz High Frequency RFID Inlay mpempe akwụkwọ
Next: RFID NTAG216 okirikiri nhọrọ ukwuu Inlay
N'ezinụlọ RFID Inlay mpempe akwụkwọ
Ịkwanyere RFID Card Inlay
Uhf RFID ihennyapade Inlay Tag Label
RFID Ucode Gen2 okirikiri nhọrọ ukwuu Inlay
RFID LF + HF + UHF NFC Inlay mpempe akwụkwọ